Uceba Utyelelo Lwakho Olulandelayo?
Ukuqala ngoLwesihlanu, nge-20 ka-Agasti nge-5 PM Isigunyaziso seNqila entsha yaseHanover siya kufuna nabani na ongaphezulu kweminyaka emibini ukuba anxibe imaski ngelixa ekwindawo ezingaphakathi zikawonkewonke, nokuba sithini na imeko yokugonywa.
Ukukhusela ngcono impilo kunye nokhuseleko lwamalungu ethu, iindwendwe, kunye nabasebenzi, sitshintshe izinto ezimbalwa malunga nendlela iindwendwe zethu ezingena ngayo kwiMyuziyam. Ukunceda ukunciphisa ukuxinana, silawula inani leendwendwe ngokuthi amalungu kunye neendwendwe zithenge amatikiti kwangaphambili. Nceda ujonge ulwazi olungezantsi ukuze ufunde ngakumbi malunga notshintsho esilusebenzisileyo ukuphucula amava akho kunye nokuqinisekisa ukhuseleko lwakho.
Thenga amatikiti akho
​Omabini amalungu kunye neendwendwe zokwamkelwa ngokubanzi kufuneka zithenge amatikiti okungena kwiMyuziyam kwi-Intanethi ngaphambi kokuza kwiMyuziyam. Undwendwe ngalunye, oluneenyanga ezilishumi elinesibini ubudala nangaphezulu, luya kufuna itikiti. Ukuba ulilungu, ukungena kwakho kusimahla, kodwa kuya kufuneka ugcine amatikiti ukuze amkelwe ngosuku kunye nexesha elikhethiweyo.
Abangengawo amalungu ​
AbangengoMalungu bagcine amatikiti akho apha.
Amalungu kufuneka aqale abhalise i-imeyile yawo kwiwebhusayithi yethu ngokubhalisela indawo yethu apha.
Nje ukuba ubhalisiwe, amalungu angangena kwikona ephezulu ngasekunene kwaye agcine amatikiti akho.
Awuyi kuba neakhawunti kwiwebhusayithi yethu de ubhalise kwindawo yethu usebenzisa i-imeyile eqhagamshelwe kubulungu bakho.
Amalungu oluntu (afana nokupasa kweThala leeNcwadi) kufuneka afowunele 910-254-3534 ext 106 ngosuku olunye phambi kokuba ugcine amatikiti akho.
Abanini bamakhadi be-ACM Reciprocal Network abavela kwezinye iimyuziyam kufuneka bafowunele i-910-254-3534 ext 106 ngosuku olunye ngaphambi kokuba bagcine amatikiti.
Cwangcisa ukubonisa ushicilelo lwetikiti lakho lomzimba okanye umfanekiso weskrini ukubonisa amatikiti nge-elektroniki kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Ukungena kwiMyuziyam ​
Ukuba unestroller, ungasebenzisa indawo yokungena ekwi-2nd Street. Kukho intsimbi yokungena emnyango kunye ne-intercom kumnyango westroller!
Zonke iindwendwe zeMyuziyam iinyanga ezili-12 nangaphezulu ziya kufuna itikiti.
Isigunyaziso esitsha seHanover County siya kufuna nabani na ongaphezulu kweminyaka emibini ukuba anxibe imaski ngelixa ekwindawo ezingaphakathi zikawonkewonke, nokuba sithini na imeko yokugonywa.
AMALUNGU: Nceda uze nekhadi lakho lobulungu ukuze abasebenzi bedesika yethu bakongeze umhla omtsha wokuphelelwa kwakho.
Ngenxa yomthamo olinganiselweyo, kukho amatikiti alinganiselwe kwilungu ngalinye kunye neqela elingelolungu. Ukuba amatikiti amalungu athengisa, amalungu angathenga amatikiti angengomalungu ukuba umthamo uvumela.
Into omawuyilindele xa undwendwela
IMyuziyam yaBantwana yaseWilmington ithatha izindululo zempilo ngokuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19 kakhulu. Ngokufanelekileyo, nazi ezinye izinto ekufuneka uzikhumbule xa undwendwela:
Bonke abasebenzi, amavolontiya, kunye naziphi na iindwendwe ezingaphezulu kweminyaka emibini kufuneka zinxibe imaski yobuso.
Ukuba wena, okanye nabani na kwiqela lakho, uziva egula, unomkhuhlane, ukukhohlela, okanye ukuphefumla nzima, nceda uhlale ekhaya.
Nceda uhloniphe umgama oziimitha ezintandathu phakathi kwamaqela eendwendwe kunye nabanye.
Iindwendwe ziya kufumana izikhululo zococeko ezitsha kulo lonke iMyuziyam kunye nemiqondiso eyongeziweyo apho zikhoyo izindlu zangasese. Iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba zihlambe izandla rhoqo xa zityelele.
Ukhuseleko lweendwendwe zethu kunye neendwendwe, umthombo wamanzi uya kuvalwa. Nceda uqinisekise ukuba uza nebhotile yamanzi. Sinawo amanzi athengiswayo eFront Desk.
Nceda ube nobubele kwaye uhloniphe abanye ngexesha lotyelelo lwakho ngokulandela izikhokelo zethu. Oku kuya kunceda ukuqinisekisa amava akhuthazayo namnandi kuye wonke umntu.
Ukubuza imibuzo rhoqo
Ngaba iMyuziyam ifuna ukuba iindwendwe zinxibe imaski?
​ Ewe, ukuqala ngolwesihlanu, nge-20 ka-Agasti nge-5 PM Isigunyaziso seNqila yaseHanover County siya kufuna nabani na ongaphezulu kweminyaka emibini ukuba anxibe imaski ngelixa ekwindawo ezingaphakathi zikawonkewonke, nokuba sithini na imeko yokugonywa.
Kuthekani ukuba ndiqaphela ezinye iindwendwe ezinganxibanga iimaski zazo kwiMyuziyam?
Nceda wazise umsebenzi kwaye siyakukhumbuza undwendwe lwethu ngemithetho.
Kuthekani ukuba ndinemeko yempilo kwaye andinakunxiba imaski?
Isigunyaziso esitsha seHanover County siya kufuna nabani na ongaphezulu kweminyaka emibini ukuba anxibe imaski ngelixa ekwindawo ezingaphakathi zikawonkewonke, nokuba sithini na imeko yokugonywa. Ukhuseleko nempilo yakho, kunye nempilo yabasebenzi bethu kunye neendwendwe, ukuba awukwazi ukunxiba imaski asikukhuthazi ukuba undwendwele ngeli xesha. Jonga imisebenzi yethu yasimahla ye-CMoW yasekhaya apha kubuntofontofo kunye nokhuseleko lwekhaya lakho.
Ndililungu, ngaba kusafuneka ndigcine itikiti ukuze ndingene?
​ Ewe, amatikiti akho asimahla, kodwa kufuneka uwabhukishe kwi-intanethi ngaphambi kokufika kwakho. Ungagcina amatikiti kwaye uthenge amatikiti ngokwakho ukuba umthamo uvulekile. ​
Kwenzeka ntoni xa ndifika kwiMyuziyam ngaphandle kwetikiti ebekelwe bucala?
Ukuba ufika kwiMyuziyam ungenalo itikiti, kwaye umthamo ukhona, uya kucelwa ukuba uthenge itikiti nge-smart phone yakho okanye ngokobuqu kwiDesika yethu yangaphambili.
Ngaba iMyuziyam isabonelela ngeenkqubo zemihla ngemihla?
Ewe, iMyuziyam isanikezela ngeenkqubo zemihla ngemihla. Ngenxa ye-COVID-19, siza kube sinciphisa umthamo wenkqubo yethu. Ukubhaliswa kwangaphambili kwiDesika ePhambili kuyafuneka xa ufika. Kuphela ngabantwana ababhalisiweyo abaya kuvunyelwa ukuba bathathe inxaxheba. Uluhlu oluneenkcukacha lweenkqubo zemihla ngemihla ezibonelelwayo, cofa apha .
Ndinemiba yokungena njengelungu ukuze ndigcine amatikiti am, ndenze ntoni?
Ukuze ungene, kufuneka ubhalisele indawo yethu nge-imeyile oyinikezile xa uthenga ubulungu bakho. Nceda usitsalele umnxeba ku-910-254-3534 okanye uthumele i-imeyile uMququzeleli woBulungu uJessie Goodwin kubulungu@playwilmington.org ukusombulula lo mba.
Njengoko iMyuziyam ivaliwe ngoMatshi-Septemba, ingaba ubulungu bam buza kwandiswa?
Bonke ubulungu obusebenzayo bandiswa ngokuzenzekelayo ngeenyanga ezintandathu.